Mụta ịnya anyịnya igwe na Iwuli Software | Martech Zone
Mụta ịnya anyịnya igwe na Iwuli Software
Tuzdee, Machị 27, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ọrụ abụwo ezigbo ihe ịma aka n'oge na-adịbeghị anya. Bụ onye njikwa ngwaahịa bụ ọrụ na-adọrọ adọrọ - mgbe ị ga-arụ ọrụ ahụ. Amaara m na nke ahụ bụ okwu na-enweghị isi ikwu mana ị bụ n'ezie isi etiti na ọgụ na-aga n'ihu na Ahịa, Nkwalite, Ọrụ Ndị Ahịa na ndị isi na ụlọ ọrụ.
Fọdụ ndị mmadụ tufuo saịtị nke eziokwu ahụ abụghị na ebumnobi karịa iji wulite ọtụtụ atụmatụ ma ọ bụ ihe ọzọ dị jụụ Web 2.0 ngwa, ebumnobi bụ inye ndị mmadụ ike ka ha rụọ ọrụ ha nke ọma, ma rụọ ọrụ nke ọma. Kwa ụbọchị, ajuju m, "Kedu atụmatụ dị na ntọhapụ ọzọ?"
Anaghị m aza azịza ajụjụ a maka na m anaghị elekwasị anya na atụmatụ niile, ihe m lekwasịrị anya bụ iwulite azịza nke na-enyere ndị ahịa aka ịrụ ọrụ ha nke ọma na ịrụ ọrụ nke ọma. Kwado ndị ahịa gị bụ ihe gbasara ya. Ọ bụrụ n ’ị lekwasịrị anya n’ihe buru ibu ma na-egbu maramara, ị ga-enwe nnukwu ihe ma na-egbu maramara na-enweghị ndị ahịa na-eji ya.
Google wuru alaeze bido na otu igbe ederede. M na-agụ ụfọdụ isiokwu ebe Yahoo! akatọla Google na ha nwere ike. Kedu ihe ka mma iji rụọ ọrụ karịa otu igbe ederede? Ekwela ka m mehie, Yahoo! na-ewulite ụfọdụ atụmatụ dị egwu na ngwa ha. M hụrụ n'anya njirimara njirimara ha, anaghị m eji ngwa ha.
Google na - akuziri ndi mmadu otu esi agbagoro igwe, ma ha gara n’ihu na - emezi igwe. Site na iwulite nyocha nke oma site na otu igbe ederede, Google nyere otutu nde mmadu ikike ime oru ha karie. Ọ na-arụ ọrụ, ọ bụ ya mere onye ọ bụla ji eji ya. Ọ bụghị mara mma, ọ nweghị ihu ụlọ mara mma, mana ọ nyere ndị ọrụ ha ike ịrụ ọrụ nke ọma na nke ọma.
Nwere ike ichetụ n'echiche itinye gị afọ 4 n'ịnyịnya igwe ọsọ 15 nke nwere enyo ngosi, akara ngosi, ite mmiri, wdg. Wouldn't gaghị. Yabụ kedu ihe ịchọrọ iji wuo ngwa ngwanrọ nke nwere ọsọ 15, enyo, akara na ite mmiri? Ikwesighi. Ebumnuche bụ ime ka ha mụta ịgba igwe kwụ otu ebe ka ha nwee ike ị nweta site na isi A ruo ebe B. Mgbe Point A na Point B na-etolite na mgbagwoju anya, nke ahụ bụ mgbe ịchọrọ igwe kwụ otu ebe nwere ọrụ ọhụụ na-akwado ya. Ma ọ bụ naanị mgbe onye ọrụ nwere ike ịnya ya!
Nke ahụ pụtara na wiilị ọzụzụ dị oke (anyị na-ahụ ndị a n'ụdị dibịa afa). Ozugbo onye ọrụ nwere ike ịgba ịnyịnya igwe ahụ n'ezie, ị nwere ike wepu wiilị ọzụzụ. Mgbe onye ọrụ ahụ na-eme nke ukwuu na-agba ịnyịnya ígwè ahụ ma na-achọ ịnya ya ngwa ngwa, tinyezie ya ụfọdụ. Mgbe onye ọrụ chọrọ ịgbapụ n'okporo ụzọ, tinye ha na Mountain Bike. Mgbe onye ọrụ ga-akụtu okporo ụzọ, tụba ya na enyo. Na maka njem ndị ahụ dị ogologo, tụba n'ime ite mmiri ahụ.
Google na-eme nke a site na ịhapụ mmụba na-aga n'ihu na ndozi na-aga n'ihu na ngwanrọ ha. Ahụrụ m eziokwu ahụ n'anya na ha ji ihe dị mfe nko m, ha wee na-agbakwunye ya. Ha bidoro site na igbe ederede, tinyezie ihe ndị ọzọ dịka nchọta onyonyo, nyocha blog, nyocha koodu, ibe peeji nke Google, Akwụkwọ Google, Akwụkwọ ozi Google… Ka m mara iji sọftụwia ha, ha gara n'ihu na-emeziwanye ya iji kwado usoro ndị ọzọ na-eme ka m rụọ ọrụ m nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma.
The igwe kwụ otu ebe bụ ihe na-eme ka mmadụ si ebe A na-arụ B. Mee a nnukwu igwe kwụ otu ebe na mfe ịnya, mbụ. Ozugbo ha mụtara otu esi agba igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ chegbuo onwe ha maka otu esi akwado usoro ndị ọzọ site na iwulite arụmọrụ ọhụrụ na ngwa gị.
Cheta - Google malitere site na igbe ederede di mfe. M ga-ama gị aka ka ị lelee ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa na azụmaahịa na-aga nke ọma na weebụ ị ga-ahụ otu njirimara pụrụ iche maka ha niile… ha dị mfe iji.
Amaara m onye m na-atụ vootu
Mar 28, 2007 na 9: 33 AM
Ọmarịcha post! Karịsịa hụrụ n'anya ntụnyere.
Echere m na ihe ndị njikwa ngwaahịa nwere ihe isi ike n'oge a na-akọwapụta mgbe bụ oge kwesịrị ekwesị iji gbakwunye atụmatụ "igwe kwụ otu ebe" yana otu esi etinye 'em na atụmatụ ndị dị ugbu a nke ndị ọrụ ha maara.
Apr 2, 2007 na 2: 15 PM
Nnukwu post Doug. Ọtụtụ ihe ndị dị ka ihe dị jụụ na-eme ka ọrụ ahụ sie ike. Thehụ akwụkwọ ahụ “Gịnị kpatara sọftụwia na-adakọ” ma ọ bụ "Nrọ na Usoro"?
Ha abụọ na-ekwu maka otu esi emebi ngwanrọ site na ịnwa ịdị jụụ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe vs. naanị ị nweta ọrụ ahụ naanị.
Apr 2, 2007 na 3: 34 PM
Daalụ, Chris! Ejim i muta ihe a n’aka gi. Built wuru Kpọmkwem Ngwaọrụ na ụkpụrụ nke ụlọ software maka ndị ọrụ na n'ụzọ dị mfe idozi nsogbu ahụ. Apụghị m ichere ịhụ ihe ị na ụlọ ahịa gị na-esote, Ngwakọta!